Tun Tun's Photo Diary: Mandalay 2013-JUNE (Bus ride, Baby, Food & Movie)
ဘတ်စ်မယ် က ကလေးပါလို. စောင်အပိုတွေ ထုတ်ပေးပါတယ်။ ပူအိုက်တဲ့ ဇွန်လ ဆိုပေမယ့် ရန်ကုန်-မန္တလေး ဘစ်စကားစီးရင် လမ်းမှာ အမြဲတမ်း ချမ်းတယ်လေ။
မန္တလေး ရောက်ရောက်ချင်း အကြိုက်ဆုံး အစားသောက်ဖြစ်တဲ့ တိုဟူးနွေးကို အရင်စားဖြစ်တယ်။ ဒါကတော့ ၃၅လမ်း x ၇၁ လမ်း ဆီဆိုင်နားက သျှမ်းသျှမ်းဆိုတဲ့ ဆိုင်မှာစားတာပါ။ အဲ့ဆိုင်က အိမ်နဲ.လဲ နီးတယ်၊ ဆိုင်ကလဲ သန်.သန်.ရှင်းရှင်း ကျယ်ကျယ်လွင့်လွင့် ဆိုတော့ သဘောကျလို. ခဏခဏ သွားစားဖြစ်တယ်။
ဒညင်းသီးပေါ်ချိန်မို. ဗန်းရွတ်ရောင်းတဲ့ ဒညင်းသီးကိုလဲ စားခဲ့သေးတယ်။
ရတနာပုံဈေးနား ဖြတ်သွားတော့ အဲအချိန်တုန်းက အရမ်းနာမည်ကြီးတဲ့ Pee Mak ထိုင်းသရဲကားပြနေတာ တွေ.ခဲ့တယ်။ အဲ့ကားကို မြန်မာပြည်မပြန်ခင် စင်ကာပူမှာ တခါကြည့်ပြီးပြီ။ ရုပ်ရှင်ကိုလဲ ကြိုက်လို.၊ ဈေးကလဲ ပေါလို. ညကျရင်လာကြည့်မယ်။
မန္တလေးမှာ နေ.ခင်းဘက် အပြင်မှာ အရမ်းပူတော့ အိမ်မှာပဲနေဖြစ်တာများတယ်။ ပူတာမှ အရည်ပျော်ကျမတက်ကို ပူတာ။ အဲဒီတော့ ဟောဒီက တူမလေး ကိုပဲ ဓါတ်ပုံ များများ ရိုက်ဖြစ်တာပေါ့။
Pee Mak ညပွဲ ကြည့်ဖို. ရတနာပုံဈေးကို ညကြီး ရောက်လာတယ်။ ညဆိုတော့ ညဈေးရှိတယ်လေ။ အဲ့တုန်းက စိန်တလုံး သရက်ပေါ်ချိန်ဆိုတော့ ဟောဒီလို ရောင်းနေတာကိုတွေ.ခဲ့တယ်။ သရက်သီး တစ်လုံး ၅၀၀နဲ. ၁၀လုံးဝယ်ခဲ့တယ်။
ရတနာပုံဈေး (Diamond Plaza) အပေါ်ဆုံးထပ်မှာ ရုပ်ရှင်ရုံ ရှိတယ်။ ရုပ်ရှင်ပြတဲ့ အခန်း၃ခန်းရှိပြီး၊ ရုပ်ရှင် ၃ကားတပြိုင်တည်း ပြတယ်။ အဲ့အချိန်တုန်းက လက်မှတ်ဈေးက ၁၅၀၀၊ ၁၈၀၀ စသဖြင့် ရှိတယ်။ စင်ကာပူက ဈေးနဲ. ယှဉ်ရင်တော့ တော်တော်လေးကိုပေါပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ရုံက နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီ ရုပ်ရှင်ရုံပါ။ စိတ်ပျက်ဖို.ကောင်းတာက ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့ သူတချို.ပါ။ မြန်မာပြည်မှာ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတဲ့ အချက်တွေကတော့ ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ ဖုန်းပြောတာ၊ စကားတွေပြောတာ၊ ပြီးတော့ နေကြာစိကိုက်တဲ့ အသံ၊ ငါးမုန်.ကြော် ကိုက်တဲ့ အသံ၊ မုန်.ထည့်တဲ့ ကြွတ်ကြွတ်အိတ် ကထွက်တဲ့ အသံတွေ နဲ. ဆူညံနေတာပဲ။
နောက်ပြီး မြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံခြားကားပြတဲ့အခါ မြန်မာစာတန်းထိုးရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ ။ ထိုင်း၊ မလေးရှားနဲ. အင်ဒိုနီးရှားမှာဆို နိုင်ငံခြားကားပြရင် သူ.တို.ဘာသာစကား စာတန်းထိုးပါတယ်။ ဒါမှ ကြည့်တဲ့သူတွေလဲ နားလည်ပြီး ရုပ်ရှင်ကို ပိုအာရုံစိုက်လာမယ်။ မဟုတ်ရင် စကားနားမလည်လို. ကြည့်လဲ မထူးဘူးဆိုပြီး ရုပ်ရှင် ကို အာရုံမစိုက်ပဲ စကားတွေပြော၊ ဖုန်းတွေပြောတာတွေ လျှော့သွားနိုင်တယ်။ တချို.ကျလဲ အပြင်မှာ ပူလို. အဲယားကွန်းအရသာခံချင်တာနဲ. ရုပ်ရှင်ကြည့်တာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။ အိမ်မှာ အဲယားကွန်ရှိတောင် မီးက မမှန်ဘူးလေ။
ရုပ်ရှင်ကြည့်ပြီး အ်ိမ်ပြန်ရောက်တော့ တူမလေးက အိပ်နေပြီ။ :)
at 11/21/2014 08:31:00 PM
She is so cute. Want to squeeze her.